Löfven: Bulshada ayaan go'aanka u gacan geliney - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Löfven: Bulshada ayaan go'aanka u gacan geliney
La daabacay torsdag 4 december 2014 kl 14.31
Miisaaniyad sideeda loo wada diido
Fustav Fridolin (MP) bredvid statminister Stefan Löfven meddelar att extraval kommer hållas i Sverige 22 mars 2015. Foto: TT
Muddo aan saacad gaarsiisneyn dabadeed kolkii ey xil-dhibaannada baarlamanku cod aqlabiyad ah ku gudbiyeen miisaaniyaddii xisbiyada mucaaradka ee garabka midig - Alians-ka, ayuu madaxa dawladda Stefan Löfven oo uu garab taagan yahay wasiirka wax-barashada Gustav Fridolin, kana mid ah labada hoggaamiye ee xisbiga Miljöpartiet oo ey xulufada ku yihiin dhismaha dawladda ee garabka bidix ee casaan-cagaarku iclaamiyeen doorasho cusub oo dalka ka dhacda:
- Dawladdu waxay go'aansatay inay 29-ka bisha diseembar ku dhawaaqi doonto go'aankeeda ah in doorasho cusub ey dalka ka dhaci doonto. Annaga oo middaa u tiigsaneeyna xeerarka dhismaha dawliga ee cutubka saddexaad qodobkiisa 11-aad. Middaasina aan uga gol leenahey in bulshadu gar-qaad ka noqoto xaaladda cusub ee siyaasdeed ee dalku ku sugan yahay. Waa midda ugu muhiim-san. Xaaladdu ma ahan sidii horay loogu yiqiin. Waxaa lagu jiraa xaalad cusub. Waana mid loo baahan yahay in bulshadu meel ka istaagto.
- Doorashada ayaa dhici doonta ama loo dareeri doonaa 22-ka bisha maarso ee sannadka foodda innagu soo haya 2015, sida uu ku dhawaaqay Stefan Löfven mar uu shir jaraa'id ka hadlayay.
Inkasta oo uu Löfven iclaamiyay doorasho inay dalka ka dhici doonto ayuu haddana si sharciyan ah ugu dhawaaqi doonaa 29-ka bishan diseembar oo eynu ku jirno, middaasina oo dhici doonta 22 bisha maarso. Middaasina ugu wacan tahay maadaama uu xeerka dalka u degsani dhigeyo inuu madaxa dawladdu uu doorasho ku dhawaaqi karo ugu yaraan saddex bilood dabadeed laga soo bilaabo marka ugu horeeysa ee uu baarlamanka cusubi kulan isugu yimaado, middaasina oo ku beegan 29-ka bisha diseembar ee sannadkan 2014.
Sababta dawladda dalka haysa ku kaliftay inay ku dhawaaqdo doorasho dheeri ah ayay ugu wacan tahay, middaasina oo uu ku soo dhoweeyay Gustav Fridolin (MP) inuu bayaaniyo:
- Doorashada ayaa u dhaxeeyn doonta garabkayaga oo u diyaar ah wada-shaqeeyn iyo garabka kale oo muujiyey in aanu diyaar u ahayn wada-shaqeeyn. Waxay noqon doontaa doorasho u dhaxeeysa garabkayaga oo doonaya inay casriyeeyaan Iswiidhen, iyo garabka kale oo isaguna indhaha ka dabooshay xaqiiqda dalka ka jirta, kuwaasina oo uu la jeeday xisbiyada garabka midig ee Alliansen-ka iyo xisbiga Sverigedemokraterna oo suurtageliyay in doorashadii baarlamanka lagaga guuleeysto miisaaniyaddii dawladda, kolkii uu xisbiga SD u codeeyay miisaaniyaddii ay soo ban-dhigeen xisbiyada Allians-ka ee ku bahoobay garabka midig. Waana halka ay xaajadu ka murugtay oo
Amuurtaa ayaa haddaba sabab u noqotay inuu madaxa dawladda Stefan Löfven, maadaama uu baarlamanku cod aqlabiyad leh ugu codeeyay, isla-markaana uu hoggaanka baarlamanku ansixiyay miisaaniyaddii mucaaradka, kuna khasban yahay in dawladdiisu hir-geliso miisaaniyadda mucaaradka sannadka foodda innagu soo haya ayuu marka Löfven ka door-biday inuu ku dhawaaqo doorasho dheeri ah, isagoona horey u sheegay in aanu marnaba aqbali doonin in dawladdiisu xirato shaarka mucaaradka oo ay hir-geliso miisaaniyadda garabka Midig ee Allians, maadaama codeeyntii baarlamanka lagaga guuleeystay.
Go'aanka dawladda Löfven oo siyaabo kala duwan loo soo dhoweeyey
Af-hayeenka dhaqaalaha ee xisbiga Modaraterna, Anna Kinberg Batra ayaa sheegtay mar ay shir-jaraa'id si wada-jir ah u qabteen xisbiyada garabka midig ee allians-ka inay soo dhoweeyneyaan, isla-markaana diyaar u yihiin iney kula hardamaan doorashada uu ku dhawaaqay Stefan Löfven:
- Iminka wuxuu Stefan Löfven iclaamiyay doorasho dhici doonta bisha maarso. Waxaan marka diyaar u nahay inaan bulshada la kulanno oo kala xaajoonno arrimmaha ay ka mid yihiin kobaca dhaqaale, suuqa shaqada, siyaasadda ku saleey-san shaqada iyo hoowlaha ballaaran ee hor-yaala dalkan Iswiidhen, sida ay sheegtay.
Ku simaha hoggaamiyaha xisbiga Sverigedemokraterna Mattias Karlsson ayaa ka sheegay shir-jaraa'id oo ka dambeeyay ku dhawaaqiddii Stefan Löfven iyo in doorasho la qaban doono in xisbiga SD uu soo dhoweeynayo go'aankaa, isla-markaana diyaar u yahay iney guul baaxad leh ka soo hoyaan:
- Sverigedemokraterna dhankayaga waan ka soo dhoweeyneynaa go'aanka ah suurtagal doorasho hor leh lagu geleyo. Dhumucda xisbigayaga ayaa la isu geeyay una diyaar ah in aanu ka qayb qaadano, sida uu sheegay.
Su'aashuse waxay tahay, ayameey dan ugu jirtaa doorashadan? Waa su'aal jawaabteeda la ogaan doono fiid-nimada 22-ka bisha maarso, kolka ay qabsoonto doorashada dheeriga ah ee dalka ka dhici doonta. Halka aad weli nagala socotaan waa Radio Sweden, qaybta af-soomaaliga.
Shirjaraa'id taariikhi ah
onsdag 3 december 2014 kl 17.37
onsdag 3 december 2014 kl 17.19
Löfven oo ku dhawaaqi doona doorasho cusub
Codeeynta baarlamanka iyo siyaasadda cakiran ee miisaaniyadda
onsdag 3 december 2014 kl 15.27